ရောင်းချရန်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူအဘို့လက်ကားအဝါရောင် slate မှော်စိုက်ပျိုးပန်းပွင့်အိုး | မှော်ကျောက်စာ
ရေ Feature ကို
ပန်းပွင့် Pot & စိုက်ပျိုး
Cobble ကျောက်တုံး Birdbath
ကျောက်ခေတ်နစ်မြုပ် & ကန်
အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ - အရောင်တင်သောအရောင်များ - (1 ...
D11-17cm, H20-27cm ဟိမဝန္တာပန်းရောင်ဆားမီးခွက်
ရောင်းရန်အဝါရောင် slate မှော်စိုက်ပျိုးပန်းပွင့်အိုး
ထုတ်ကုန်များပြသ: အဝါရောင် slate မှော်စိုက်ပျိုးပန်းပွင့် potand အပင်ဿုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုက်ညီ, ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါင်းစပ်သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုပိုပွီးသဘာဝကအဖြစ်ကိုပိုပြီးစိတ်ပြေလျော့သွားစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းပွင့်စိုက်ပျိုးသင်ဟာအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းအတွက်ရွေးချယ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုရပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကျောက်, စကျင်ကျောက်, ထုံးကျောက်, slate, အဖြစ်, သဘာဝကျောက်ကိုဖန်ဆင်းသည်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုကြိုဆိုသည်။ မှော်ကျောက်ခေတ်သင်သည်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်အဘိုးနှင့်သဘာဝကြောကျခဲပန်းပွင့်စိုက်ပျိုးပူဇော်ဖို့ရည်ရွယ်။ ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာရှိပါတယ် ...
ပစ္စည်း & အရောင်: Basalt, စကျင်ကျောက်, ကြောကျကျောက် granite.etc
မျက်နှာပြင်: ပိုလန်, Honed, etc
မူလအစ: Quanzhou, ဖူ, တရုတ်
အဝါရောင် slate မှော်စိုက်ပျိုးပန်းပွင့်အိုး များနှင့်အပင်ဿုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုက်ညီ, ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါင်းစပ်သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုပိုပွီးသဘာဝကအဖြစ်ကိုပိုပြီးစိတ်ပြေလျော့သွားစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းပွင့်စိုက်ပျိုးသင်ဟာအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းအတွက်ရွေးချယ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုရပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကျောက်, စကျင်ကျောက်, ထုံးကျောက်, slate, အဖြစ်, သဘာဝကျောက်ကိုဖန်ဆင်းသည်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုကြိုဆိုသည်။
မှော်ကျောက်ခေတ်သင်သည်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်အဘိုးနှင့်သဘာဝကြောကျခဲပန်းပွင့်စိုက်ပျိုးပူဇော်ဖို့ရည်ရွယ်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးရန်ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေး မှစ. , မြေတပြင်လုံးအပြောင်းအလဲနဲ့အတူတင်းကြပ်စွာဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စည်း & အရောင်: ကျောက်: စသည်တို့ကို, မီးခိုးရောင်အနီ, အဝါရောင်
မျက်နှာပြင်: စသည်တို့ကိုပွတ်, Honed, မီးလျှံ, Sandblasted, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, အက်ဆစ်လျှော်,
သည်အခြားအမည်: စသည်တို့ကိုအိုးစက်ရုံ, ကျောက်ပန်းပွင့်အိုး,
ယခင်: ကျောက် G603 ပြင်ပတွင်စတုဂံပန်းပွင့်အိုးများ
အသေးစိတ်ထုပ်ပိုး: ကျနော်တို့ထုပ်ပိုး decorative granite ကြောကျခဲပန်းပွင့် အိုး s နှင့်စိုက်ပျိုး အလျောက်ယင်းတို့၏ fumigated သစ်သားသေတ္တာများက။
Delivery အသေးစိတ်: များထဲမှအပြည့်အဝကွန်တိန်နာအဘို့အဦးစီးအချိန် ဃ ecorative ဆ ranite ကြောကျခဲပန်းပွင့် အိုး s နှင့်စိုက်ပျိုး တဝိုက်4~5ရက်သတ္တပတ်ယူပါ။
အလှဆင်ပါ g ranite ကြောကျခဲပန်းပွင့် အိုး s နှင့်စိုက်ပျိုး are widely used in not only in garden, but also patio, park, bar, office, public place, etc., and colorful plants in them can make your living and working environment more natural as well as more relaxing. Selectingaplanter made of natural stone material will not bring burden to the environment, while it allows you getasense of overall balance and harmony.
နေရပ်လိပ်စာ: Xiamen ရုံး: D3 အဆောက်အအုံ 5th, Dong ပူးလူး No.22, Siming Qu, Xiamen စီးတီး, ဖူ, တရုတ်, 361008
ဖုန်း / WhatsApp / Wechat: +86 18959223598
ရုံး: +86 189 5922 3598
Skype / အီးမေးလ်: info@magicstonesculpture.com
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန Orde ...
အဘယ်ကြောင့်သဘာဝဟိမ ၀ န္တာဆားမီးအိမ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း ...
နိုင်ငံများစွာသည်ကျောက်တုံးပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်သည် ...
မည်သည့်စုံစမ်းရေးသို့မဟုတ်မေးခွန်းမဆို, သင်၏အီးမေးလ်ကိုငါတို့ထံသို့ထားခဲ့ပါကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်။
©မူပိုင်ခွင့် - 1995-2021: All Rights Reserved ။